ပြင်းထန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို NUG မှတ်တမ်းတင်ထား — မြန်မာဌာန
၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးထားသူတစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်သားများ နှိပ်စက်နေသည့်မြင်ကွင်း။
RFA က သီးခြားကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ အောက်တို ဘာ ၂၂ ရက် ဒီနေ့အထိ အချိန်ကိုးလနီးပါး ကာလအတွင်း ရဲနဲ့ စစ်တပ်က အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားသူတွေ အပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု၊ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ရှိနေပါပြီ။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရုံမက ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကစလို့ အရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ချင်းနဲ့ ကယားပြည်နယ်က လက်နက်ကိုင် ခုခံစစ်တွေ ကို နှိမ်နင်းရာမှာလည်း ရွာတွေကို မီးရှို့တာ ဒေသခံတွေကို အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်တာတွေကို စစ်ကောင်စီ ဘက်က ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ ပြည်ထဲရေးနဲ့ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ကစလို့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ပြည်သူတွေ အလွယ်တကူ တိုင်ကြားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ပြည်တွင်းက တိုင်ကြားစာတွေကို အဆက်မပြတ် ကောက်ယူ စိစစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီအမှုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ကို ပေးပို့တိုင်ကြားရုံမက အခြေအနေပေးလာတဲ့အခါ ပြည်တွင်းမှာပါ တရားမျှတမှုရအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ အခုစုဆောင်းထားတဲ့ အချက်တွေက ICC တစ်ခုတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြန်ဆုံး နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုရရှိပြီးတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ ရှိလာမယ်၊ တရားစီရင်ရေး ခိုင်မာမှုရှိလာမယ် ဒါတွေကိုသုံးဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း ဒီကိစ္စတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ တင်ပြနိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ အစီရင်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက် တကယ်လို့ ICC မှာ လက်မှတ်ထိုးလာမယ်၊ လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ကနေ တရားစွဲဆိုတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဲတော့ ICC တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာမဆို အမှန်တရားနဲ့ တရားဥပဒေကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်း မှာ အားလုံးကို သုံးသွားမှာပါ"
သူတို့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းကနေ တိုင်ကြားစာပေါင်းများစွာကို ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွ လက်ခံရရှိတဲ့အခါ နစ်နာသူတွေကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်း အတည်ပြုပြီးမှ အပြင်းထန်ဆုံး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ၄၀၀ ကျော်ကို စိစစ်ရွေးထုတ်ခဲ့တာလို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိတ်မြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် အပြစ်ရှိသူ တစ်ဦးချင်းစီကို အရေးယူ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ဖြစ်ပါတယ်။
(ICC) ကို စတင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့က အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့မှာ Rome Statute လို့ခေါ်တဲ့ ရောမသဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး လက်ရှိမှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၂၃ ခု လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပါတယ်။ မြန်မာအပါအဝင် ကျန် ၄၂ နိုင်ငံကတော့ လက်မှတ် မထိုးရသေးပါဘူး။
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စစ်တပ် ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ICC မှာ အရေးယူ အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံဟာ ရောမ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားဖို့ လိုပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ICC မှာ အရေးယူ အပြစ်ပေး နိုင်ဖို့အတွက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ICC က တရား စီရင်မယ်ဆိုရင် သဘောတူတဲ့အကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့က စာရေးသား တင်ပြထား တယ်လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ်။ လိုအပ်ရင် NUG အနေနဲ့ ရောမ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
"တိုင်ကြားသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးက နံပါတ်တစ် အရေးကြီးဆုံးပေါ့။"
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကို တိုင်ကြားလို့ရမယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ချင်ပြီး အပြစ်ရှိသူတွေကို ထိုက်တန်တဲ့ တန်ရာတန်ကြေး ပြန်ပေးဆပ်စေချင်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ည) ရပ်ကွက် လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့ မျက်ကွယ်သေဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသူတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ကြားတော့ကြားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဆီ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတာ။ တိုင်လို့ရရင် ကျနော်တို့ တိုင်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်တွေကို ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အကြောင်းတွေ၊ မပါဘဲနဲ့ တရားစွဲ ခံရတာတွေ၊ အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ပျက်သွားတာတွေ အကုန်လုံးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ မပါဘဲနဲ့ မျက်ကွယ်သေဒဏ် ချထားခံရတာတွေ ကျနော်တို့ ပြန်ဖြေရှင်းခွင့်ရရင် ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ ကမ္ဘာရဲ့ စစ်ခုံရုံးလို့ သိထားတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ ကျနော်တို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ရမယ်လို့ ထင်တယ်။ အဓိက ကတော့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြည်သူတွေအများကြီး သေထားတာ၊ ထွက်ပြေးနေရသူတွေ လည်း အများကြီးလေ။ သူ့တန်ရာ တန်ကြေးတော့ ပြန်ပေးဆပ်စေချင်တာပေါ့"
စစ်တပ်ရဲ့ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့တာကို ခံရရုံမက ပစ္စည်းလု၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေကိုပါ ကြုံခဲ့ရတဲ့ မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ ကင်းမရွာသူတစ်ဦးကတော့ ကင်းမရွာကိစ္စကို ICC ရောက်အောင် မဖြစ်မနေတိုင်ကြားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ICC ထံ ပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုး ဖြစ်တယ်လို့လည်း လူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။
"ကျမတို့ တိုင်ရမှာ။ သူတို့က စားနပ်ရိက္ခာတို့၊ အိမ်ဖျက်ဆီးတာတို့၊ ပစ္စည်းတွေယူတာတင် မကသေးဘူး။ အ.ထ.က ကျောင်းထဲက ပစ္စည်းတွေကို မီးရှို့တဲ့အဆင့်ထိ လုပ်သွားတာ။ တစ်ဦးချင်းစီ တိုင်လို့ရတယ် ဆိုရင် ဒီသက်သေတွေ၊ ပုံတွေနဲ့အတူတူ တိုင်မှာ။ သတ်တာကလည်း ရိုးရိုးသတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီသုံးယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပြီးမှ အောက်ကနေ မိုင်းခွဲပြီးသတ်တာ။ နှစ်ယောက်ကကျတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ စစ်တပ်နဲ့ တည့်တည့်တိုးတာ။ ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတာ။ ဆိုင်ကယ်နဲ့တွဲပြီး မီးရှို့ခံရတာက တစ်ယောက်ပေါ့။ ဦးညွှန့်ရွှေဆိုတာ။ ရွာထဲမှာ သူက နေရစ်ခဲ့တာ။ သူ့လက်ကိုလည်း ကလေးတွေကို ပုခက်လွှဲတဲ့ ကြိုးနဲ့ ချည်ပြီးတော့မှ သူတို့က မီးရှို့သတ်ခဲ့တာ"
၂၀၂၁၊ ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့မှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးစဉ် (Photo: CJ)
ပြည်တွင်းက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေကို ICC ထံ တိုင်ကြားဖို့ NUG ဘက်က လုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်သဘောထား သိနိုင်ဖို့အတွက် စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို RFA က မေးမြန်းရာမှာတော့ အောက်ခြေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် ပြည်တွင်းက တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့သာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်လို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။
"တပ်မတော်အနေနဲ့ရော၊ အစိုးရအနေနဲ့ရော အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေ၊ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေမှာ သူ့ရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအတိုင်းပဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ တည်ဆဲဥပဒေထက် ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်တာ မရှိနိုင်ဘူး။ တချို့ ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ခံပါတယ်။ တချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ ဖြစ်စဉ် ခပ်နည်းနည်းမှာတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာက ဒီကျွန်တော်တို့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအရတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သလိုမျိုး ဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ဒါတွေကတော့ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းတဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတကာမှာ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာသူတို့ တိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မတိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေအရပဲ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်"
ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တရားဥပဒေရေးရာ ပါရဂူဘွဲ့ ကျမ်းပြုနေသူ “Fortify Right” အဖွဲ့က ကိုနစ်ကီဒိုင်းမွန်း ကတော့ နစ်နာသူတွေအနေနဲ့ NUG ကတဆင့် ICC ကို တိုင်ကြားမယ်၊ သက်သေထွက်မယ် ဆိုရင် တိုင်ကြားသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
"Website ရဲ့လုံခြုံရေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက် လုံခြုံရေးတွေကို NUG က ဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ်။ တိုင်ကြားသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးက နံပါတ်တစ် အရေးကြီးဆုံးပေါ့။ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ဘာလုပ်လာနိုင်လဲဆိုရင် သူတို့ကို ခြိမ်းခြောက်တာ၊ သူတို့တွေ ကြိုးစားပြီး အချက်အလက် ပေးပို့နေတယ် ဆိုတာ သိတယ်ဆိုရင် သူတို့ အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေကို NUG က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်တွေ ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်။ တချို့ သက်သေတွေဆိုရင် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ ပြည်တွင်းမှာ နေတယ်ဆိုရင် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိချင်မှရှိမယ်။ အကာအကွယ်ပေးမယ် ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်ရော အခုလုပ်နေတဲ့ တရားစွဲဆိုရေး လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ကို အထောက်အကူ ပြုမယ်ပေါ့"
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC)မှာ တရားစွဲဖို့ဆိုရင် ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်သံ၊ အချက်လက် သက်သေ အထောက်အထား တွေသာမက လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သက်သေထွက်ဆိုချက်ကလည်း အရေးကြီးတာကြောင့် သက်သေခိုင်မာ မှသာ ထိထိရောက်ရောက် တရားစွဲလို့ရနိုင်မယ်လို့လည်း လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေက ထောက်ပြ အကြံပေးပါတယ်။
NUG ပြည်ထဲ‌ရေး၊ တရားရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဝန်ကြီးဌာနတွေကတော့ တိုင်ကြားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်လက်တွေကို လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်အောင် သိမ်းဆည်းထားမယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တိုင်ကြားထားတဲ့အတိုင်း သက်သေတွေလည်း ခိုင်မာတယ်ဆိုရင်တော့ ကျူးလွန်သူတွေကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်တာ၊ ရုံးတင်စစ်ဆေးတာနဲ့ အပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကို ဆက်လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သက်သေအချက်လက်တွေ စုဆောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တရားရုံးက လက်ခံနိုင်တဲ့ သက်သေတွေဖြစ်အောင် စုဆောင်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပြု တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မိုးမောက်က ဧဒင်ဒုက္ခသည်စခန်း ပစ်ခတ်ခံရလို့ အခန်းပေါင်း ၆၀ ပျက်စီး
ဒီပဲယင်းတိုက်ပွဲ စစ်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပစ်ခတ်လို့ သုံးယောက် သေဆုံး
လွထြန္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ says:
ဒီအမှုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ကို ပေးပို့တိုင်ကြားရုံမက
"ကျွန်တော်တို့ အခုစုဆောင်းထားတဲ့ အချက်တွေက ICC တစ်ခုတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြန်ဆုံး နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုရရှိပြီးတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ ရှိလာမယ်၊ တရားစီရင်ရေး ခိုင်မာမှုရှိလာမယ် ဒါတွေကိုသုံးဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း ဒီကိစ္စတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ တင်ပြနိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ အစီရင်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက် တကယ်လို့ ICC မှာ လက်မှတ်ထိုးလာမယ်၊ လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ကနေ တရားစွဲဆိုတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အဲတော့ ICC တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာမဆို အမှန်တရားနဲ့ တရားဥပဒေကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်း မှာ အားလုံးကို သုံးသွားမှာပါ"
သူတို့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းကနေ တိုင်ကြားစာပေါင်းများစွာကို DRဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွ လက်ခံရရှိတဲ့အခါ နစ်နာသူတွေကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်း အတည်ပြုပြီးမှ အပြင်းထန်ဆုံး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ၄၀၀ ကျော်ကို စိစစ်ရွေးထုတ်ခဲ့တာလို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုပါတယ်။
DR. SA SA SAY MORE THAN THAT CASES AND ALREADY SENT TO ICC SINCE FEW MONTHS AGO.
IS ITB DAY DREAMING. TRYING TO GET CLAPPING OR LAY MEN SUPPORT.